Samsung Renove: nidaamka dhimista ee Galaxy S9 | Androidsis
Eder Ferreno | | MWC, Noticias, Samsung
Shalay waxay ahayd maalin muhiimad weyn u leh shirkadda Samsung. Tan iyo markii wadamada kala duwan ee Kuuriya ay soo bandhigeen Galaxy S9 iyo S9 +, labadeeda calan ee cusub. Laba qalab oo wax badan siin doona ka hadalka bilaha soo socda. Laakiin, maahan waxa kaliya ee shirkaddu ku dhawaaqday maalintan bilowga ah ee MWC 2018. Maaddaama calaamaddu ay sidoo kale ku dhawaaqday Samsung Renove.
Waa maxay Samsung Renove? Magaciisu wuxuu durba ina siinayaa tilmaan yar. Waa nidaam qiimo dhimis loogu talagalay dadka isticmaala ee doonaya inay iibsadaan Galaxy S9. Waad heli kartaa qiimo dhimis marka aad iibsaneyso taleefanka haddii aad wareejiso moobilkaaga.
Qorshaha ayaa hadda laga heli karaa dukaamada lammaanaha iyo dukaanka rasmiga ah ee shirkadda. Markaa kuwa xiiseynaya kaqeybgalka ama isticmaalka aaladda Samsung Renove horey ayey usameyn karaan. Sidee ayuu qorshahan summadu u shaqeeyaa? Ugu horreyntii, waxa adeegsadaha laga rabo inuu sameeyo waa iibso Galaxy S9 ama S9 +. Waa tallaabada koowaad ee wax walba.
Marka taleefanka la iibsado, cusboonaysiinta ayaa laga shaqeyn doonaa. Soo socda, isticmaaleyaashu waxay u baahan yihiin inay aadaan websaydhka Brightstar, tan isku xirka. Halkaas waa inaad raacdaa talaabooyinka la tilmaamay, kuwaas oo dhammaantood si wanaagsan loo sharxay. Wixii aad ku qasban tahay galaan IMEI ee qalabka oo sidaas ayaan ku ogaan doonnaa sida ay u qiimeeyaan qalabka.
Waxay kuxirantahay nooca aan soo bandhigi doono, qiimayaashu way kala duwan yihiin. Kuwani waa qaar ka mid ah qiimaha lagu daabacay bogga Samsung Renove:
Inkasta oo sumadda lafteedu ay soo sheegayso taas Qiimeyntan waxaa lagu sameeyay iyadoo lagu saleynayo in taleefanka uu ku jiro xaalad wanaagsan. Markaa haddii terminal-kaaga uusan ku jirin xaalad wanaagsan, ma heli doontid lacagtaas. Intaas waxaa sii dheer, tan Samsung Renove waa tallaabo xayeysiin ah oo socon doonta illaa 25-ka Maarso. Markaa haddii aad ku fikireyso inaad iibsato Galaxy S9 oo aad haysato taleefan Samsung ah, haka waaban inaad isticmaasho barnaamijkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Renove: nidaamka dhimista ee Galaxy S9